Cruises " Journey-Assist - Cruise amin'ny ranomasina. Tsangantsangana transatlantic
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Cruises
Inona ny cruise?
Sakafo eny an-tsambo
Hatsarana sy fahasalamana amin'ny fitsangatsanganana
Haavo fitsangatsanganana Cruise
Manidina amin'ny menaka
Torohevitra efa niaina
Inona ny Cruise
Cruise - dia an-dranomasina na ranomasina, ahafahana miaina ny rivotra anaty ranomasina sy miala sasatra amin'ny fiononana, mitsidika firenena maro ao anatin'io dia io ihany. Mandry eo amin'ny tokotanin-tsambo ambony, mitsoka ny zava-pisotro ankafizinao ao anaty bara, handeha amin'ny hotely "mitsingevana" mankany amin'ny firenena na tanàna hafa ianao. Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia misy itovizany amin'ny hotely miorina amin'ny tany, ary indraindray ny tolotra omeny dia maro kokoa noho ny amin'ny hotely kintana 5. Ho anao - trano fisotroana sy trano fisakafoanana, trano fanasan-damba, trano famakiam-boky, fivarotana, fivarotana firavaka, klioba Internet, klioban'ny ankizy, efitrano fampisehoana misy fandaharana fampisehoana miloko, trano fandroana sy hatsaran-tarehy, gym, spa spa, jacuzzis, dobo filomanosana, disko, tenisy ny kianja, ny filokana, ny lalao baolina kitra kely sy golf, ny ranomandry, ny hazakaza-fiara ary ny simulator amin'ny bowling. Ankoatr'izay, ity dia tsy lisitra feno iray amin'ireo zavatra azonao atao ankafizo rehefa mitsangatsangana.
Ny fizotran'ireo sambo mandeha sambo dia mampahatsiahy ny fandehanana amin'ny fiaramanidina. Mila manolotra ny entanao ianao, izay avelan'ny porter eo akaikin'ny varavaranao, ary tokony handalo ihany koa ny fanaraha-maso pasipaoro.
Ny fitsangatsanganana iray dia manome anao fahafahana hitsidika firenena maro mandritra ny dia iray, ary tsy ilaina ny manala kitapo tsy tapaka, satria ny tranonao no miaraka aminao. Isan'andro dia mandehandeha amin'ny tanàna vaovao ianao, mody hariva mody misy sakafo hariva tsara sy fialamboly mazava.
Fialan-tsasatra mahafinaritra ity, ahafahan'ny tsirairay mahita fialamboly ho azy manokana.
For lovers Fiainana ara-pahasalamana (fomba fiaina mahasalama) Misy gymnasium, sehatra fanatanjahantena, SPA, tady, dobo filomanosana ary menu manokana.
Ireo mpankafy ny fialam-boly milamina kokoa dia manana fotoana ialana sasatra amin'ny seho amin'ny seza, ny fiainana manokana miaraka amin'ny boky ao amin'ny trano fisotroana, kafe ao anaty tontolo milamina eo amin'ny lavarangana.
Ireo mpankafy fialam-boly dia hahaliana ny be dia be amin'ny fihetsehana samihafa, fifaninanana, fampisehoana, fialam-boly dihy. Ho an'ny mpiloka dia misy casinos manana milina slot. Ho an'ny tanora dia misy klioba sy efitrano manokana ho an'ny lalao virtoaly. Ho an'ny ankizy dia misy fandaharana fialamboly manokana izay azo ampiharina amin'ny sokajy sokajin-taona samihafa.
Sakafo mandritra ny fitsangatsanganana
Tokony hifantohana fatratra ny sakafo, izay atolotry ny bara, trano fisakafoanana ary kafe maro eny an-tsambo. Ny habetsaky ny voankazo, legioma ary hazan-dranomasina dia mety hahafaly na dia ireo felatanana mahay manavaka aza. Amin'ny ankamaroan'ny sambo rehetra, ny fikarakarana sakafo dia manome serivisy famantaranandro, ary ny zava-drehetra dia tafiditra amin'ny vidin'ny fitsangantsanganana mihitsy (afa-tsy ny zava-pisotro misy alikaola sy ny trano fisakafoanana tsirairay). Noho izany, ny fitsangantsanganana dia azo antsoina hoe paradisa tena fialan-tsasatra ho an'ny olon-tiana handany fotoana amin'ny fampiononana, hahazo fahatsapana mahafinaritra ary hankafy ny sakafo haute.
Ny be dia be, ny trano fisakafoanana, ny trano fisakafoanana, ny trano fisotroana eny an-tsambo tsirairay izay mahatonga ny fahafinaretana amin'ny karazany sy ny hakanton'ny sakafo amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona amin'ny andro. Ny mpizahantany iray dia mety:
Tombano ny isan-karazany sy ny kalitaon'ny sakafo amin'ny buffet.
Manomeza sakafo hanina mandritra ny sakafo hariva ao amin'ny trano fisakafoanana lehibe.
Manokàna takariva mahafinaritra ao anaty rivo-piainana ao amin'ny trano fisakafoanana hafa, izay atolotra menu manitra sy serivisy tsara be.
Manana sipa amin'ny doka eo akaikin'ilay kamory.
Ho an'ny moka amin'ny sakafo any amin'ny kafe meksikanina na amin'ny grill bar.
Mankanesa any amin'ny buffet amin'ny misasak'alina mba hanandrana karazan-tsakafo samy hafa, na mankany amin'ny buffet gala izay ahafahanao gaga amin'ny zava-kanto culinary an-dakilasy.
Ny cruise rehetra dia azo raisina ho paradisa gourmet marina!
Isaky ny lineran'ny cruise maoderina dia mitazona izay rehetra ilaina mba hitazonana ny endriny:
Efitrano fanaovana aerobika, yoga ary karazan-jotra hafa.
Toeram-panatanjahantena ho an'ny basikety, volley.
Efitrano fanaovana tenisy latabatra.
Efitrano fandraisam-bahiny fandroana spaoro miaraka amina fitsaboana rehetra.
Salons tsara tarehy izay manolotra serivisy feno.
Ny menio, izay misy lovia ho an'ny tsirony rehetra, ao anatin'izany foana ny sakafo misy kaloria kely sy ny zavamaniry.
Noho izany, tsy misy isalasalana fa hijery tsara ianao ary hahatsapa ho tsara.
Ny tranon'ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina dia tena mampitony ny fampiononana. Azonao antoka foana fa ny haavon'ny fampiononana sy ny kalitaon'ny serivisy dia hahafahanao manafatra kafe, dite, tsakitsaky ao anaty tranonao. Ny mpitantana dia manadio ny tranony indroa isan'andro.
Ny kabinina tsirairay dia manana telefaona, fahitalavitra ary fametrahana rivotra tsy miankina. Ny ankamaroan'ny cabin dia manana taovolo, azo antoka sy minibar. Ao amin'ny efitrano fandroana dia afaka mahita ny andalana rehetra amin'ny fidiovana ilaina fidiovana sy ny lamba famaohana lehibe maro ianao. Ary koa, ao amin'ny liners marobe ao amin'ny suite dia misy mpanondrana na concierge.
Ny vidin'ny tapakila dia matetika voafaritra amin'ny antony maro: ny kilasin'ny liner, ny habeny, ny isan-karazany ny menio, ary ny fisian'ireo chef malaza. Ny fepetra lehibe indrindra amin'ny vidin'ny tapakila isan-karazany ao anaty liner iray dia ny fisiana na tsy fisian'ny varavarankely ao anaty trano. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny vidin'ny dia dia tsy misy gratuities ho an'ny mpiasa ao anaty sambo. Ny salan'isa vidiny dia 10-15 dolara isan'andro isan'olona, ​​izay alaina amin'ny karatry ny mpizahatany.
Mampalahelo fa ny zava-pisotro misy alikaola sy Wi-Fi dia iharan'ny fiampangana amin'ny sambo fitsangantsanganana. Matetika dia manomboka amin'ny $ 15 ny tavoahangy misy divay. Ny lalàna mifehy ny ankamaroan'ny orinasa dia mandrara tsy hitondra alkaola miaraka aminao. Ny fomba tokana hivoahana dia ny fividianana setroka misy alikaola isan-karazany, izay manampy amin'ny fitsitsiana be ny vidiny.
Saingy amin'ny ankapobeny, ny fitsangatsanganana dia ahafahanao mitahiry amin'ny fialan-tsasatra miaraka amina serivisy fampiononana sy serivisy avo lenta. Rehefa dinihina tokoa, ny tapakila dia efa misy sakafo tsy misy famerana ary miditra amin'ny fialamboly rehetra. Ny fandaniana fanampiny dia kely indrindra. Eto an-tanindrazana, noho ny kalitaon'ny serivisy sy ny traikefa mitovy, tsy maintsy handoa bebe kokoa ianao amin'ny farany.
Hetsika aorian'ny fitsangatsanganana
Mpizahatany efa za-draharaha maro no milaza fa ny fitsangantsanganana an-tsambo dia azo ampitahaina amin'ny zava-mahadomelina - rehefa nanandrana dia toy izany ianao, dia ho raiki-pitia amin'ity safidy fialantsasatra ity ary te hahita firenena maro kokoa. Ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina tsotra na fitsangatsanganana bus any Eropa dia tsy ho ampy ho anao aorian'izany.
Cruises dia mety amin'ny fanovana matetika ny traikefa amin'ny dia, nefa tsy variana amin'ny lalana mandalo.
Izany no angamba ny fitsangatsanganana iray mampiadana indrindra.
Tsy mandany fotoana amin'ny fivezivezena any amin'ny firenena ianao, satria mandritra ny dia ianao dia afaka miala voly, mitsidika fitsaboana spaoro, efitrano fanaovana spaoro ary dobo filomanosana, misakafo any amin'ny trano fisakafoanana misy sakafo isan-karazany, mijery seho fialamboly isan-karazany eny ambony sambo.
Isan'andro sy Sunsets miavaka any an-dranomasina!
Rivotra an-dranomasina. Ny fitsangantsanganana toy izany dia miala sasatra na dia ny hozatra sarotra indrindra aza.
Ny fahadiovana sy ny serivisy amin'ny takelaka fitsangantsanganana dia fibaikoana avo kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny.
Mora ny misakana ny sakana fiteny. Ny mpiasa dia mazàna mahalala ny fiteninao.
Fahadisoan'ny fialan-tsasatra amin'ny fitsangatsanganana
Aretina mikiky. Ny soritr'aretiny dia mora manimba ny fialan-tsasatrao.
Tsy ny olona rehetra te hahita ny ranomasina isan'andro ary tsy mahazo milomano ao.
Ny fitsangantsanganana dia tsy mety amin'ireo natahotra rano na toerana malalaka.
Matetika, tsy dia misy fotoana be dia be hifankahalala amin'ny kolontsaina sy ny zava-misy any amin'ireo firenena notsidihina. Ny fanamafisana dia bebe kokoa amin'ny mandany fotoana amin'ny liner.
Na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny sambo, dia fetra voafetra miaraka amin'ny andiany voafetra.
Matetika ianao no mitsidika tanàna misy seranan-tsambo, ary tsy mahaliana indraindray.
Fitsangatsanganana an-tongotra ... angamba ny fomba fampialana voly indrindra .. Ny tena lehibe indrindra dia ny, "All inclusive".
Andramo io! Mendrika izany ianao! 😉